Nhume dzakabva kuBhabhironi (1-8)
39 Panguva iyoyo mambo weBhabhironi, Merodhaki-bharadhani mwanakomana waBharadhani akatumira tsamba nechipo kuna Hezekiya, nekuti akanga anzwa kuti Hezekiya+ akanga achirwara uye kuti akanga apora.+ 2 Hezekiya akavagamuchira nemufaro,* akavaratidza imba yake yepfuma,+ kureva sirivha, goridhe, mafuta ebharisamu nemamwe mafuta aikosha, zvombo zvake zvese, nezvese zvaiva maichengeterwa pfuma yake. Hapana chavasina kuratidzwa naHezekiya muimba yake* uye munzvimbo yake yese yaaitonga. 3 Pashure paizvozvo muprofita Isaya akapinda maiva naMambo Hezekiya akabvunza kuti: “Varume ava vati chii uye vabva kupi?” Hezekiya akabva ati: “Vabva kunyika iri kure, kuBhabhironi.”+ 4 Akabva ati: “Vaonei mumba* mako?” Hezekiya akapindura kuti: “Vaona zvese zviri mumba* mangu. Hapana chandisina kuvaratidza munochengeterwa pfuma yangu.” 5 Isaya akabva ati kuna Hezekiya: “Inzwa shoko raJehovha wemauto, 6 ‘Mazuva achasvika pachaendeswa kuBhabhironi zvinhu zvese zviri mumba* mako nezvakaunganidzwa nemadzitateguru ako kusvikira nhasi. Hapana chichasara,’+ anodaro Jehovha.+ 7 ‘Uye vamwe vanakomana vako vauchabereka, vachatorwa uye vachava vakuru vemumuzinda wamambo weBhabhironi.’”+ 8 Hezekiya akabva ati kuna Isaya: “Shoko raJehovha ramataura rakanaka.” Akatiwo: “Nekuti pachava nerunyararo nekugadzikana* panguva yandinenge ndiri mupenyu.”*+
^ ChiHeb., “akavafarira.”
^ Kana kuti “mumuzinda wake.”
^ Kana kuti “mumuzinda.”
^ ChiHeb., “pamazuva angu.”